युगसम्बाद साप्ताहिक - हिमालमा लामखुट्टे नाँच्न थाले...
हिमालमा लामखुट्टे नाँच्न थाले...
Thursday, 06.15.2017, 01:01pm (GMT+5.5)
नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण सर्वाधिक असर गर्ने मुलुकको सूचीमा पाँचौं स्थानमा छ । त्यसैले त हिमाली क्षेत्रमा लामखुट्टे देखा परेका छन् । तराईको तुलनामा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढिरहेको छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टिले खाद्यान्न र खानेपानीमाा समस्या पारिरहेको छ । अनि खाद्यबाली चक्रमा ठूलो अन्तर आएको छ । यसअघिसम्म हाम्रो कल्पना हिमालमा लामखुट्टे लाग्छ भनेर हुन्थेन । अनि काफल फागुनमै पाक्छ, गुराँस माघमै फुल्छ भनेर । तर, अहिले यस्तै यस्तै अनौठा र अप्राकृतिक लाग्ने दृश्यहरु देख्न–सुन्न पाइन्छ ।
यसको कारण जलवायु परिवर्तन हो । जलवायु परिवर्तनले मानव सभ्यतालाई मात्र होइन पृथ्वीको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्न थालेका संकेत माथि वर्णन गरिएका दृश्यहरु हुन् । धनी, औद्योगिक र सम्पन्न मुलुकहरुको लापरर्वाहीका कारण यस्तो स्थितिको सिर्जना भैरहेको छ । यो नेपालको मात्र होइन विश्वका अनेक मुलुकको साझा समस्या हो । समुद्री आँधीको चपेटामा परिरहेका छन् । हिमाली मुलुकका हिउँ पग्ने, समुद्री किनारका मुलुक डुब्दै जाने स्थिति उत्पन्न भएको छ । अर्कोतिर अन्र्टाटिका र आर्कटिके सागरको हिउँ तीब्रगतिमा पग्लदै गएको छ । यो अर्को ठूलो चुनौति हो ।
सन्दर्भ नेपालकै जोडौं– वैज्ञानिकहरु नेपाल जस्ता जलस्रोतका धनी मुलुकहरुको भविष्य समेत अन्योलमा पर्ने बताउन थालिसकेका छन् । जलवायु परिवर्तनकै कारण जलविद्युत निर्माण गर्दा जलाशययुक्त योजना संचालन गर्नुपर्ने र वर्षाको पानी जम्मा गर्ने योजना बनाउनुपर्ने सुझाव वैज्ञानिकहरुले दिन थालेका छन् । नेपाल जस्तो हिमाली राष्ट्रको पानीको स्रोत हिमालय भएका कारण पनि हिउँ पग्लदै जाँदा नदीको स्रोत घट्दै जाने र जलविद्युत उत्पादनमा मात्र होइन, खानेपानी तथा सिंचाईमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यसले मानव जीवनशैलीमै अप्रत्यासित परिवर्तन ल्याउने छ । पानी र खाद्यान्नका लागि मारामारको स्थिति उत्पन्न हुनेछ । खान र बाँच्नकै लागि आप्रवासीहरुको ओइरो ती मुलुकहरुमा लाग्नेछ । हालै मात्र जापानमा जलवायु परिवर्तनका कारण हावामा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा दोब्बर बढेको पाइएको छ । जापान विश्वमा सबभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा पर्दछ । यसै समस्याको समाधानका लागि विश्वका औद्योगिक मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि अघिल्लो वर्ष पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे तर हालै अमेरिकाले सो सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेर विश्वलाई आतंकित पारिदिएको छ ।
पर्सियादेखि बर्मासम्मको हिमालय पर्वतमाला सर्वाधिक जोखिममा छ । यिनलाई नजोगाउने हो भने यो क्षेत्रका कुनै पनि मुलुकको भौगोलिक अस्तित्व अहिलेको जस्तो नरहने चेतावनी समेत आउन थालेका छन् । हिमताल पग्लदै जाँदा यसको असर गंगा भ्याली हुँदै बंगलादेशसम्म पर्छ । हिमाललाई सुरक्षित राख्न सकेनौं भने मैदान र सागर पनि सुरक्षित रहन सक्दैन । हिमाल र सागरबीचको अन्योन्याश्रित प्राकृतिक सम्बन्धलाई कायमै राख्ने र यसमा खलबल ल्याउन नहुने तथ्य बुझ्नैपर्छ ।
औद्योगिक राष्ट्रहरुले उत्सर्जन गरेको हरित गृह ग्यास यसको सर्वाधिक ठूलो कारण हो । त्यस्तै युद्ध, बम, बारुदको धुवा अनि विकासको नाममाा वातावरणीय सन्तुलनको ख्यालै नगरी हुने निर्माणले अर्को अनिष्ट निम्त्याइरहेको छ । हुन त नेपाल वातावरण मैत्रि संस्कृति भएका मुलुक हो । तर वातावरण शुद्ध राख्नेतर्फ परम्प्रागत हाम्रा विधिहरुको उपयोगलाई धर्मको नाम दिएर दुत्कारिएको छ । नेपालको संस्कृति नै वातावरणमैत्री थियो र छ । वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरुले हरेक दिन वाचन गर्ने स्वश्तिवाचन र गर्ने यज्ञ यज्ञादिले वातावरण शुद्धतातर्फ संकेत गरेको छ । तर यसलाई केवल कुनै जात विशेष वा धर्म विशेषको कर्मको रुपमा व्याख्या गरेर दुत्कार्न थालिएको छ । हिमाल खलबलियो भने सागरमा गडबडी उत्पन्न हुन्छ भन्ने वैदिक शास्त्रीय मान्यता अहिले पनि स्थापित छ तापनि वातावरण शुद्ध राख्ने विधिहरुको भने अनुसरण हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालको हिमालहरु पग्लिदै छन् । नयाँ नयाँ हिमनदीहरुको उत्पत्ति भैरहेको छ भने कतिपय त कुनै पनि बेला फुट्नसक्ने उच्च जोखिममा छन् । हिमाल पग्लनुको अर्थ समथर भूभाग डुबानमा पर्नु हो । यसले सो क्षेत्रमा चर्को भोकमरी सुरु हुने स्पष्ट नै छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले यसअघि नै ती क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव हुने भविष्यवाणी गरिसकेको सन्दर्भमा भित्र्याउने बेलामा नष्ट भएका धानको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने र पीडित किसानहरुलाई कसरी राहत उपलब्ध गराउने ? यो विनाश हाम्रो कारणले होइन अरुकै कारणले गर्दा भएको हो । जलवायु परिवर्तनका कारण मासिंदै गएको दुर्लभ वनस्पति, जीवजन्तु लगायतको क्षतिपूर्ति कसरी प्राप्त हुने हो ? पत्तो छैन । स्याउ फल्ने ठाउँमा मकै र मकै फल्ने ठाउँमा अनावश्यक झारपात मात्र उम्रन थाल्यो भने त्यसको वैकल्पिक उपाय के हुने ? नेपालले अहिलेसम्म यी विषयहरुमा गम्भीर गृहकार्य गरेको पत्तो छैन । बंगलादेश र भुटानले जलवायु परिवर्तनबाट पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति उतिबेलै मागिसकेको अवस्थामा नेपालमा त्यसको डाटा संकलन कार्य मात्र सकिएको बताइन्छ ।
माटोको उर्वराशक्ति घट्दैछ । प्रांगारिक खेती गर्नुपर्ने ठाउँमा अनेक किसिमका रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरेर खाद्यान्न नै विषाक्त हुँदै गएको छ । धनी मुलुकहरु जैविक खेतीतिर आकर्षित भैरहे पनि गरिब र विकासोन्मुख मुलुकहरुमा रासायनिक मल अनुदानमा उपलब्ध गराएर उनीहरुको बाँच्ने आधार नै समाप्त पार्दैछन् । नेपाल जस्ता परम्परागत कृषि प्रणालीमा धानिएको मुलुकको कृषि उत्पादन हरेक वर्ष घट्दै जानुको मुल कारणमध्ये यो पनि एउटा प्रमुख पक्ष हो । जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष देखिएको प्रभावहरुमध्ये खाद्यान्न तथा फलफूल उत्पादनमा आएको अत्यधिक ह्रास हो । नेपाल जस्तो जैविक र भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा मौसम अनुसारको खेतीपाती गर्नु अब ठूलो चुनौतिको विषय बन्न थालेको छ ।
विगत डेढ दशकमा पृथ्वीको तापक्रम औसतभन्दा निकै बढेको छ । नेपाल जस्ता हिमाली मुलुकहरूमा हिमाल पग्लेकै कारण हिमतालहरूको संख्या बढ्दैछ । यसै गरी तापक्रम बढ्दै जाने हो भने यी हिमतालहरू कुनै पनि बेला विस्फोट हुने खतरा औंल्याउन थालिएको छ । यसो भयो भने तराई डुब्ने र हिमालको हिउ निख्रिने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसको रोकथामका उपायहरू बेलैमा नअपनाउने हो भने नेपालको तराई डुबान क्षेत्र र हिमालहरू नांगा पहाडमा परिणत हुनेछन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाललाई मात्र होइन विश्वलाई नै पर्नेछ । हिमाल र सागरको अन्योन्याश्रित सम्बन्धका कारण सन्तुलित रहेको जलवायुमा यसले ठूलो प्रभाव पार्नेछ । हिमालहरू पग्लदै गएपछि समुद्रको सतह पनि बढ्ने र यसले कतिपय टापु मुलुकहरूको अस्तित्व विलिन हुने अवस्था आउने छ ।
जलवायु परिवर्तन नेपाल वा कुनै एक मुलुकको मात्र चासो र चिन्ताको विषय होइन । धनी र विकसित मुलुकहरूले प्रकृतिमाथि गरेको अत्यधिक शोषणको परिणाम नेपालजस्ता मुलुकहरूले भोग्नु परिरहेको छ । वितेका केही वर्षयता नेपालमा जलवायु परिवर्तनको स्पष्ट संकेतहरू देखिएका छन् । मनसुनमा वर्षा नहुने मात्र होइन हिउँदे वर्षा पनि कम हुन थालेको छ । अतिवृष्टिले डुबान समस्या बढाइरहेको छ । यसले खानेपानीको समस्या झन विकराल बनाइरहेको छ भने खाद्यान्न उत्पादनमा पनि भारी गिरावट आएको छ । जलस्रोतको भण्डार रहेको भए पनि जनताको घरमा धारा र खेतमा सिंचाई सुविधा नपुगेका कारण नेपाली किसानहरू आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न विवश छन् भने खानेपानीका लागि नदी, पोखरी, कुवा, इनारको भरपर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान नै छ ।